Talada caafimaadka maskaxda ee loogu talagalay dadka waayeelka ah | Mental Health Foundation
Talada caafimaadka maskaxda ee loogu talagalay dadka waayeelka ah
Sanado badan lama arag wax u dhigma dillaaca cudurka coronavirus, markaa la yaab ma leh in dadka ay cabsi geli karto. Waxaa weli muhiim ah in aad daryeesho caafimaadkaaga maskaxda, gaar ahaan haddii aad 55 jir ka weyn tahay oo aad kelidaa meel ku nooshahay.
Lambarrada xiriirka waxtarka leh meel dhow ku hayso: Takhtarka Guud (GP), qoyska, saaxiibbada iyo tuubistaha.
Waxaa muhiim ah in aad Takhtarkaaga Guud la xiriirto haddii aad walaac ka qabto caafimaadkaaga jirka ama maskaxda.
Dadka xiriir kula jir
Telefoonka, kumbiyuutarka, raadiyaha iyo internetka ayaa noqon kara ilo taageero laga helo iyo habab lagu helo macluumaadka ku saabsan waxa diyaarka ah.
Ku fikir in aad qoraal u dirto deriskaaga oo aad weydiiso haddii ay ku caawin karaan ama kugula talin karaan qof ama adeeg ku caawin kara. Haddii aad haysato lambarka telefoonka qof aad deris tihiin qofkaas wac, waxaa laga yaabaa in aadan iminka wax u baahnayn, laakiin taasi way iman kartaa mustaqbalka.
Ka warayso kooxaha taageerada xaafadda ka jira iyo sida aad ugu biiri karto.
Soo ogow waxa aad xaq u leedahay:
Waxaa laga yaabaa in aad xaq u yeelato xirmo cunto degdeg ah
Haddii adiga laguu arko in aad ka tirsan tahay qaybta dadka “halis ku jira”, waa in aad warqad ka heshay adeegga NHS taasoo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan sida ay Dawladdu adiga kaaga taageeri karto in aad waqtigan gurigaaga joogto.
Waxyaabo yar yar oo ku caawin kara haddii aad waqti badan ama waqtigaaga oo dhan kelidaa tahay:
Hawlo caadi kuu ah ayaa ku caawin kara waxayna ku dareensiin karaan in aad xukunka hayso.
Dhegeyso muusikada aad jeceshahay ee ku xasuusinaysa qaybo kaladuwan oo noloshaada ka mid ahaa.
Siyaado filimo uga daawo telefishinka ama dhegeyso raadiyaha.
Waxaa kuu fiicnaan karta in aad iska yarayso wararka aad maalin walba ka hesho fayruska.
Dhaqdhaqaaqa wad maalintaada adigoo samaynaya jimicsi fudud haddii aad karayso.
Dadka kale xiriir kula jir. Waxay tani noqon kartaa qorshaynta waqtiyada toddobaadka ka mid ah ee aad wici doonto saaxiibbada iyo qoyska.
Taxaddar muuji si aad u nabad qabto
Waqtigan shiddada ah waxuu dadka ka muujiyaa dhinacooda ugu fiican iyo dhinacooda ugu xun.
Haddii wax kula qaldan yahay ha dhexgalin. Gurigaaga ha u soo dayn oo yaanu soo galin qof aanan aqoonsi haysanin. Ha ka jawaabin farriin iimayl ah oo ku weydiinaysa macluumaad shakhsi ahaaneed oo adiga kugu saabsan ama ku saabsan dhaqaalahaaga. Macluumaadka bangigaaga cidna ha u sheegin haddii ay ku horjoogaan ama internetka kaagala soo xiriiraan.
Marwalba fiiri aqoonsigooda ama waraaqahooda.
Waxaa caafimaadkaaga maskaxda u fiican taageerada aad siiso dadka kale
Si nabad ah ula xiriir deriskaaga laga yaabo in ay cidla ku jiraan.
Telefoonka - kooxaha iskula xiriira barnaamijka WhatsApp iyo iimaylka ayaa ah habab wanaagsan oo xiriirro lagu dhisto oo si nabad ah loogu wada xiriiro iyadoo laga hadlayo gargaarka laga yaabo in ay dadku u baahan yihiin iyo sida ugu fiican ee tan loo diyaarin karo.
Taageerada xaafadda – Kooxaha Gargaar Isweydaarsiga ee cudurka COVID-19, ururrada Age Scotland & Carer Organisations ee xaafadda, kawnsallada xaafadaha
Age Scotland – Khadka saaxiibtinimada ayaa furan laga bilaabo 9ka subax - 5ta galab Isniin - Jimce. 0800 12 44 222 iimayl: [email protected]
Independent Age (Da'da Madaxbannaan) - Khad caawin ayaa ka diyaar ah lambarka 0800 319 6789 (Ingiriiska)
The Silver Line si aad ula sheekaysato 0800 470 80 90 (Ingiriiska) diyaar ah 24 saac / 7 maalin 365 maalin sanadkii.
This translation was funded by Foundation Scotland and the National Emergencies Trust and distributed by the Scottish Refugee Council.